Indawo entle yokuphola e-Oakura - I-Airbnb
Indawo entle yokuphola e-Oakura
Indlu enevaranda yonke sinombuki zindwendwe onguTash
Ubuhle obutsha obumangalisayo obuyilwe ngobunewunewu bokubuyela kwindawo ebalaseleyo, engathintelwanga emilanjeni kunye neembono zolwandle.
Ifakwe kakuhle ngokuziva kwe-boutique.
Umbono onoxolo kodwa i-5 mins Oakura, i-surf beach entle kunye ne-15 mins ukusuka kwiPlymouth entsha. Wifi
Ifanelekile ukubaleka ngothando okanye iholide yosapho! Le ndlu yahlukile kwaye iyamema ngayo yonke into oya kuyidinga ngekhefu elimangalisayo lokuphumla. Kukho indawo entle yokutyela kunye negumbi lokuhlambela elikhokelela kwindawo yokuhlala evulekileyo. Ukuhamba okumangalisayo kwangaphakathi-ngaphandle. Ibhafu yangaphandle. Inkundla yentenetya yesikhukula. Ibhedi yokuhamba. Isitulo esiphezulu. Iibhayisikili zeentaba ziyafumaneka. I-BBQ. 60 intshi smart TV kunye Netflix. Inkqubo yesandi yeZeppelin.
Itafile yangaphandle, i-sunshade kunye neziko. I-oveni yepizza yangaphandle.
Ibhulakfesi isithinteli siyafumaneka xa uceliwe.
Ibhedi enkulu eyi-1, imatrasi ebekwa phantsi eyi-1, \_u00A0Ibhedi yosana eyi-1
4.98 · Izimvo eziyi-306
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi306
I-Oakura yeyona ndawo usiya kuyo-ulwandle oluhle lwe-surf oluneekhefi, iindawo zokutyela, iivenkile, indawo yokudlala yabantwana kunye nokuhamba ngaselunxwemeni. I-Egmont National Park kunye ne-Lucy's Gully nazo zikwimizuzu nje ukusuka kude.
I-Plymouth entsha yimizuzu elishumi yokuqhuba apho unokonwabela ukutya okumnandi, ikofu, uphonononge indlela yaseNxwemeni, iLen Lye Gallery, iPukekura Park, iBrooklands Zoo kwaye ngokuqinisekileyo iWOMAD.
Umbuki zindwendwe ngu- Tash
Abanini bahlala kwindlu enkulu ekufutshane kwaye bafikeleleka ngokulula
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Oakura